रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, 'एमालेले औकात अनुसारको काम गर्‍यो' - News 88 Post
September 8, 2021 N88LeaveaComment on रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, ‘एमालेले औकात अनुसारको काम गर्‍यो’
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफ्नो औकात अनुसारको व्यवहार बुधबारको संसदमा देखाएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमालेले बुधबार संसदमा देखाएको व्यवहार स्तरहीन भएको बताइन् ।
एमालेले सांसद झाँक्रीसहित १४ जना सांसदलाई गैरसांसदको संज्ञा दिएको छ । एमालेले ‘गैरसांसदलाई संसदमा राख्न पाइँदैन’ भन्दै संसदमा नारा नै लगाएको थियो ।
यसप्रति टिप्पणी गर्दै सांसद झाँक्रीले भनिन्, ‘संसदका हत्यारा र त्यसका मतियारहरुले संसद बचाउनको लागि निरन्तर लड्नेहरुलाई यो आरोप लगाउनु आफैंमा हास्यास्पद छ । र, यो स्तरहीन प्रदर्शन, स्तरहीन चरित्रकामाथि खासै प्रतिक्रिया दिन मन छैन ।’
‘तर, तपाईंहरुलाई ननिकालेकै कारण एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्‍यो नि ?’ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा उनले थपिन्, ‘उहाँहरुको औकात अनुसारको काम गर्नुभएको छ ।’
दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘… उहाँहरुले आक्रोश पीडा, रिस, राग, बदला अझै केही दिन लिने नै हो । गैरराजनीतिक चरित्र प्रदर्शनले उहाँहरु नै नाङ्गिनुभएको छ ।’
१४ जनालाई ननिकालेसम्म सदन चल्न एमालेले नदिने रे नि ? भन्ने प्रश्नमा सांसद झाँक्रीले केपी ओलीलाई लाग्यो त्यो नहुने बताइन् ।
सभामुख सापकोटा एमालेसँग आक्रोशित, दाह्रा टाेकेर झम्टिन खाेजे (भिडियाेसहित)
म सँग रात बि’ताउन आएको युवा मेरो स्त’न्पान गरेर फर्कियो ! पूरा पढ्नुहोस
October 8, 2021 N88
दैलेखबाट निर्वाचित १९ वर्षीय वडा सभापति स्वस्तिकाबारे यसो भनिस्याे आरजु म्याडमले !
बढी भाडा लिने बसलाई पाँच हजार जरिवाना
March 22, 2021 N88